Ugwu Climb Racing 2 agbadatala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị abụọ | Gam akporosis
Ugwu Climb Racing 2 agbadatala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị abụọ
Hill Climb 2 aghọwo otu n'ime ihe mmetụta nke oge maka ịbụ egwuregwu egwuregwu dị mfe ma na-atọ ọchị. Egwuregwu vidio nke dịworị gafere usoro ndị a na nyocha na nke anyị na-ekwu maka ike ya na adịghị ike ole na ole. Ikekwe nke kasịnụ o nwere bụ mgbasa ozi nke egwuregwu na-amanye anyị imekọrịta ka oge wee gafere ntakịrị.
Kemgbe ụnyaahụ, Hill Climb 2 nwere sava ala dị nnọọ ka ha kwupụtara kemgbe ibe facebook gi. Kedu oge maka nlekọta nke sava ahụ, abụrụla ihe odyssey maka ndị otu na-ahụ maka mmepe ya na ndị egwuregwu na-ele ya anya kwa ụbọchị.
Nkwupụta sitere na Facebook bụ nke a:
Ndewo Hill Climbers, na Hill Climb Racing 2 egwuregwu sava dị ugbu a na ọnọdụ ndozi mgbe mmelite tinye site na ihe nkesa. Nke a pụtara na ị ga-enwe ike igwu egwu Adventure mode, mana iko abụọ na ndị enyi agaghị adị n'oge mmezi.
Anyị amatala ụfọdụ nsogbu metụtara ọganihu egwuregwu maka obere ìgwè ndị egwuregwu ma anyị na-arụ ọrụ ịnye ihe ngwọta ozugbo enwere ike. Daalụ maka ndidi gị!
Ọ bụrụ na ịmalite egwuregwu ugbu a, ị ga-ahụ Urekpụrụ njem dị ka naanị otu dị. Ọ bụrụ na naanị ị nwere otu elekere anọ dị na sekit dị iche iche meghere, ị gaghị enwe ike ịnụ ụtọ nnukwu egwuregwu a yana iji nkwarụ na ị gaghị enwe ike ịkwalite ụgbọ ala gị ma ọ bụ nweta igbe ụgwọ ọrụ.
Ugbu a, ka anyị nwee olileanya na n'oge na-adịghị anya ha ga-enwe ike ịmalite sava ma nwee ike igwu egwuregwu ndị ahụ na-anwale nweta nkwalite gị ugbo ala iji merie agbụrụ ndị ọzọ ma gbagoo ndị isi obodo na mba ụwa.
Ogwu Ugwu Igwe Ugwu 2
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Ugwu Climb Racing 2 agbadatala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị abụọ
Fosil ewebata Diesel, Armani na Kate Spade ngwakọ smartwatches
Instagram na-agafe 600 nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ kwa ọnwa